खुशीको खबर !! फेरी डिभी चिठ्ठाबाट अमेरिका जान पाइने, ट्रम्पका विधेयक अस्वीकृत |
खुशीको खबर !! फेरी डिभी चिठ्ठाबाट अमेरिका जान पाइने, ट्रम्पका विधेयक अस्वीकृत
२०७४, ५ फाल्गुन शनिबार १७:४२ February 17, 2018 ताजा खबरबिदेश
काठमाडौं । डिभी चिठ्ठा लगायतका विषय समेटिएका चार वटा विधेयक अमेरिकी संसदबाट अस्वीकृत भएका छन् जसमा अमेरिकामा अवैध रुपमा ल्याइएका युवा आप्रवासीको सुरक्षा समेत सामेल थियो ।
यो असफलताले नेपालीहरूलार्इ सवैभन्दा ठूलो राहत दिएको छ । डीभी परेर अमेरिका पुग्ने बिदेशीमध्ये नेपाली पहिलोस्थानमा रहँदै आएका छन । नेपालीहरूले हरेक बर्ष झन्डै चार हजारका दरले डीभी चिठ्ठा पाउँदै आएका छन् ।